Nanatanteraka izany ny minisitry ny toekarena sy ny fitantanam-bola sy ny filohan’ny filakevi-pitantanan’ny FID ary ny tompon’andraikitra eo anivon’ny Banky Iraisam-pirenena. Famatsiam-bola neken’ny Banky Iraisam-pirenena ho an’ny firenena Malagasy izay mitentina 90 tapitrisa dolara no nomena. Tanjona ny hametrahana ny politika nasionalin’ny Fiarovana ara-tsosialy sy ny fanomezan-danja ny vehivavy izay harindran’ny minisiteran’ny mponina. Famatsiam-bola maimaimpoana ara-tsosialy ho an’ireo marefo no natolotra satria iaraha-mahita ny fahasahiranan’ny vahoaka Malagasy, indrindra ny vehivavy. Tsiahivina fa efa nanomboka tamin’ny volana martsa teo ny fanampiana ary nohalavaina 30 volana, izany hoe nitarina hatrany amin’ny 2 taona sy tapany mahery. Ao anatin’ny Politika Ankapoben’ny fanjakana izany rehetra izany ary hanehoana sahady ny fametrahana ny fanjakana tsara tantana. Ankoatr’izay dia nisy ihany koa ny fifanaovan-tsonia fiaraha-miasa nahazoan’I Madagasikara fanampiana ara-bola mahakasika ny fandaharan’asa eo amin’ny sehatra angovo izay mitentina 100 tapitrisa dolara.